आज बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता, गठबन्धनको भविष्य के होला ? | DNFMEDIA
आज बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता, गठबन्धनको भविष्य के होला ?
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) का बिषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच आज निर्णायक बार्ता हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका कारण प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरं देउवाले बिहिवार अपरान्ह ३ बजे सत्तारुढ घटक दलको बैठक बोलाएका हुन् ।
सरकारमा हाल पांचदल सहभागी रहेपनि ३ दल एमसीसीको बिरोधमा र एउटा दल मौन छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमात्र अहिले खुलेरै एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो छिटो एमसीसी संसदबाट सो सम्झौता पारित गर्न हतारिएका छन् । यद्यपि सत्तारूढ घटकभित्र मतैक्यता नहुंदा उनले एक्लै एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्न सकेका छैनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले एमसीसीबारे अन्तिम छलफल गर्न बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि गठबन्धन बैठक तय भएको जानकारी दिए । यही बैठकले सत्तागठबन्धनको भविस्य निर्धारण गर्ने कांग्रेस निकटस्थहरुको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलबाट गठबन्धन बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो ।
माओवादीले यथास्थितिमा एमसीसी टेबल भए विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट पनि बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । माओवादीको चेतावनीपछि देउवा ब्याक हुँदै थप छलफलमा जुटेका हुन् ।
उसो त नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको पक्षमा छैन भने गठबन्धनकै दल राष्ट्रिय जनमोर्चा यसअघि नै एमसीसीको विपक्षमा आन्दोलित भइसकेको छ भने जसपापनि एमसीसीबारे विभाजित छ ।
Previous: सलमान खान नेपाल आउँदै
Next: जेठबाट नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुने